मिना ढकाल भन्छिन म सग बिहे गर्ने कोहि छ ? – News543Online
मिना ढकाल भन्छिन म सग बिहे गर्ने कोहि छ ?
October 9, 2021 adminLeaveaComment on मिना ढकाल भन्छिन म सग बिहे गर्ने कोहि छ ?
आफ्नो वरिपरिको वातावरण, परिवेश अनुसारको स्वतन्त्रता सबैका लागि बराबरी मात्रामा हुनुपर्छ मिना ढकालका लागि, मेरा लागि अनि तपाईंका लागि। सायद मिना ढकालले त्यही स्वतन्त्रताको लागि यो उमेरमा आएर छोराछोरी ठूला भइसकेपछि पनि यस्तो अप्रिय निर्णय लिनुपर्यो
माधव नेपाललाई मोटो रकम बुझाउँन नसक्दा मन्त्री बन्न सकिन : मेटमणी